FIFAMOIVOIZANA - BEL’AIR : Moto sy fiara nifandona, olona miisa 2 naratra mafy
Nisesisesy ny trangana lozam-pifamoivoizana teto an-drenivohitra, izay tsy maintsy ahitana moto hatrany. 20 novembre 2018
Ny alahady tolakandro lasa teo dia teny Bel’air Ampandrana indray no nisehoana fifandonana tamina moto sy fiara ka fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray fa olona miisa roa nitaingina moto no voalaza fa naratra mafy. Teo amin’ny faritry ny loha daholo no tena voa.
Fantatra tamin’ny fanadihadiana sy ny tatitra avy tamin’ireo nahita maso ny tranga fa saika hisongona ity moto ity kinanjo nivily tampoka ny fiara. Vokany, naratra mafy izy roa ireo ka nifarimbonana nalefa tany amin’ny hopitaly avy hatrany. Raha ny angom-baovao voaray hatramin’ny omaly dia mbola eo am-pitsaboana tena ireto naratra ary efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny fanadihadiana ny zava-misy.
Raha tsiahivina dia vao tamin’ny herinandro lasa teo no nahafatesana tovolahy 19 taona monja nitrosona tao ambany kamiaoben’ny “Star” teny Behenjy, teny Ampefiloha ihany koa no nahafatesana lehilahy iray nandeha mafy tamin’ny andro avy orana ka tsy avotra ny ainy na dia noentina teny amin’ny tobim-pahasalamana aza. Mitovy tsy misy valaka tamin’izany ihany koa ny zava-niseho teny Andohatapenaka sy 67 ha atsimo iny.
Voamarika tamin’ity taona ity fa ireo andiana tanora mitondra moto no tena iharam-pahavoazana mafy noho ny fisetrasetrana diso tafahoatra ny ankamaroany. Hany ka ny aina mihitsy no manaraka. Eo anatrehan’izay anefa dia tsy mitsahatra mampahatsiahy ireo polisy misahana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra mba samy hitandrina ny mpampiasa lalana satria lahitokana ny aina.